Fihazohazoan’i Yemen · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Febroary 2015 6:35 GMT
Sariitatra iray milaza mazava ny momba an'i Yemen, nataon'i Amjad Rasmi, ahitàna ny Janbiyah, antsy nentin-drazan-dry zareo entin'ireo Yemenita, lasa miendrika mari-panontaniana mitsongolika.
Lasa firenena iray tsy misy filoha sy governemanta i Yemen, izay faritana mazàna ho “fanjakàna tsy alehany” na “amoron-tevana“. Ho fanampin'izany ho an'ireo mpanaramaso, sahiran-tsaina ireo Yemenita monina ao anatin'ny fireneny amin'ny fivoaran'ny raharaha henjana tao Yemen, izay niafara tamin'ny fakàna an-keriny nataon'ny milisy Houthi ny renivohiny, Sana'a. Nalain'ny milisy Houthi ihany koa ny fampitam-baovaom-panjakana, ny Lapan'ny Filoha ary ny toeram-ponenany, sy ny toeram-ponenan'ny Praiminisitra, nataony fahirano ireo tranobe an'ny governemanta ary noraisiny ny fifehezana ny toby miaramila iray, izay ny niafaràny dia ny fametraham-pialàn'ny Praiminisitra, ny kabinetran'ny filoha ary ny filoha, tamin'ny Alakamisy 20 Janoary.
Nibitsika i Hafez Albukari, Yemenita mpanao gazety sady talen'ny Foibe Fitsapankevitra ao Yemen :
Miatrika ny fotoana iray isan'izay misitery indrindra ho azy amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao ny Yemenita. Aty Sana'a izahay saingy tsy mahafantatra izay mitranga! #Yemen
Taorian'ny nambaboany an'i Amran tany afovoan'ny lohataona tany, nalain'ny Houthis, andianà mpihoko voalaza ho tohanan'i Iran ary milaza ny hetsika ataon-dry zareo ho manohitra ny kolikoly sy ny fanodinkodinana,i Sana'a sy ny ambiny, tamin'ny faran'ny Septambra lasa teo, ary dia lasa ho ny fahefàna mahefa ao Yemen izy araka izany. Niaraka tamin'ny fanaovana sonia ny Peace and National Partnership Agreement (PNPA) – Fifanaraham-pirenena ho amin'ny fandriampahalemana sy fiaraha-miasa, fifampizaràm-pitondràna izay nikendrena hampitambatra ny Houthis sy ireo mpitaky fisintahana any atsimo ho ao anaty goveremanta iraisana, notakiana tamin'ny filoha ny hanendrena ao anatin'ny telo andro izay ho Praiminisitra “tsy miandany, tsy avy aminà antoko”, ary fananganana kabinetra iray vaovao izay nandrasana ho tao anatin'ny 30 andro nanaraka izany. Kanefa, fanamby goavana ny hahita praiminisitra mahafeno ireo mason-tsivana ireo sy ho ankatoavin'ny mpisehatra rehetra.
Bitsika miharo vazivazy avy amin'i Hisham Al-Omeisy :
Mampanahy, tsy antony intsony io hanemorana ny fisafidianana izay ho PM eto #Yemen..ilaina fotsiny ho neken'ny rehetra ny PM vaovao!
Ny soratra eo amin'ny sary: Izao ramose isany a! Mila mametraka ny mason-tsivana hisafidianana izay ho PM vaovao isika. Ilaina izy ho mpanao politika fanta-bahoaka…izay tena mahavita azy
Tany amboalohany ny filoha dia nanendry an'i Ahmed Awad Ben Mubarak, izay Sekretera Jeneralin'ny National Dialogue Conference (NDCYE) – mitovy amin'ny Kaoferansan'ny fampihavanam-pirenena. Kanefa, nolavin'ny filoha voaongana Ali Abdullah Saleh sy ny antokony “General People's Congress (GPC)”, miaraka amin'ny Houthis. Ny Sabotsy 17 Janoary lasa teo dia nalain'ny Houthis an-keriny i Ben Mubarak izay talen'ny kabinetran'ny filoha Abdu Rabu Mansour Hadi ary mbola any hatramin'ny fotoana nanoratana ity lahatsoratra ity tamin'ny teny Anglisy. Khaled Mahfoudh Bahah, izay irak'i Yemen teo anivon'ny Firenena Mikambana tamin'izany fotoana izany ary efa nitàna ny ministeran'ny solika, no notendrena ho Praiminisitra solony tamin'ny 13 Oktobra 2014, ary nankatoavin'ny Houthis. Taorian'ireny fanendrena sy fandàvana ireny, fifangaroana nitondra fahatokisana sy fanantenana anefa no niheverana an'ilay kabinetra vaovao vao avy notendrena, izay nahitàna anarana vaovao sy ministera efatra natolotra ho an'ny vehivavy.
Saingy tsy ela velona ny PNPA, izay ny hany kabinetra tsara indrindra voaforona hatramin'ny 2011. Nampihataka ireo mpanohana azy tany amboalohany ny fanoherana an-kerisetra ataon'ny Houthis sy ireo fitakiana tsy misy farany, raha efa mba nitsiry teny ny vina hahitàna Yemen sivily sy tsy misy kolikoly. Raha tokony ho ny fanajàna ny fisintahana, anjara andraikitra notànany tao anatin'ilay fifanarahana no nataony, dia ny nanaparitaka ny milisiny bebe kokoa sy nanao sàkana teny an'arabe manerana an'i Sana'a ary naka ankeriny ny talen'ny kebinetran'ny filoha no nataon'ny Houthis, nitakiany ny hanasiana fanovàna ny drafitry ny lalàm-panorenana sy fahefana misimisy kokoa, izay nitondra nankany amin'ny fifehezana tanteraka an'i Sana'a tamin'ireo tranga niseho tamin'ny herinandro lasa.
Nobitsihan'i Waddah Othman ny fandikàna vilana nataon'ny Houthis ny atao hoe fiarahamiasa:
ny fiarahamiasa dia ianao mahatanteraka ny filàko rehetra saingy raha ny filànao, afaka mipetraka sy miresaka azy ireny isika aoriana kely ao.
Na eo aza ny tabataban'ny fampahalalam-baovao erantany sy ireo ao amin'ny Golfa momba ny tahotra hisian'ny fakàn'ny AQAP (Al-Qaeda any amin'ireo saikinosy Arabo) na Iran an'i Yemen, ny tena ahiahin'ny Yemenita dia ny hoe iza no hameno ny banga eo amin'ny fitantanana ny fireneny.
Manala izay tahotra izay i Haykal Bafana amin'ity bitsika avy aminy ity :
Ho an'ireo gazety tandrefana : adabohy any ireny tantaranà horohoron'i Teherana momba an'i Yemen ireny. Tsy mbola mandre olona miteny Farsi aho na iray aza eny an'arabe eto Sana'a.
Nanohana izany i Gregory Johnson, mpanoratra ny “Ilay toeram-pialofana farany: ny adin'i Yemen, al-Qaeda, sy Amerika any Arabia” tamin'ny fitenenana hoe :
Na ny hoe efa ho azon'ny AQAP i Yemen, na ny hoe efa ho azon'i Iran i Yemen. (Samy tsy misy marina.)
Badr al-Din al-Huthi- rain'i ‘Abd al-Malik – niaina ela tany Iran, saingy tsy nahatonga azy ho Shiita 12'er izany na ho Iraniana mpanjifa.
Marobe ao Yemen no manontany tena ny amin'izay any an'eritreritry ny Houthis sy ny fiakarany tampoka teo amin'ny fitondràna – vitsy an'isa ny vondron-dy zareo nefa afaka naka ny fifehezana tanàna maro nanerana an'i Yemen, nanao bemidina tamin'ireo andrim-pamnjakana, nanaisotra tomponandraikitra, nampandohalika ny governemanta mihitsy teo anoloany. Ny toa miseho tsy azo iadian-kevitra aloha dia hoe tsy miasa irery ny Houthis.
Mivanàka i Osamah Al-Rawhani :
#Yemen Alohan'ny hatoriana F: Fa inona no maha-ara-dalàna ny Houthis ka anaovany izao hagaigena rehetra izao? Miteny amin'ny anaranà vondrona vitsy an'isa izy nefa mbola mahafehy ihany
Milaza ny maha-tafiditra an'i Saleh i Abubakr Al-Shami :
Indraindray ianao mila mitsangana sy mitehaka fotsiny. Milay ianao Abdullah Saleh.
Manondro azy io mazava tsara i Afrah Nasser, Yemenita mpanao gazety sady bilaogera monina any Soeda, :
Miaraka amin'ny fakàna ankeriny ny fitondràna nataon'ny Houthis, tsy izany no ilazàna fa firenena tsy alehany i Yemen, fa hoe mbola mitoetra ho lehilahy manana ny dindo sy fahefany i Saleh ao an-damosin'ny Houthis.
Maro no tsy afaka mamaly ilay fanontaniana hoe iza no hitondra ny firenena, ary misy tahotra momba ny mety hisian'ny kisary hoe hiverina ny fitondràna teo aloha saingy miaraka aminà endrika tanora kokoa, indrindra taorian'ny niantsoan'ny filoha voaongana – Ali Abdullah Saleh – ny hanaovana fifidianana mialoha ny fotoana, angamba ho fanomànana ny làlana ho an'ny zanany lahimatoa. Izy no tsikaritra ho mitazona ny fibaikoana tao anatin'ireo trangan-javatra nahatsiravina tamin'ny herinandro lasa.
Araka ny ambaran'ny Yemen Times (mitanisa an'i Nadia Al-Sakkaf), nibitsika tamim-pahasahiana fanavaozam-baovao ny Minisitry ny fampahalalam-baovao ao Yemen ao anatin'ny governemanta Bahah, nandritry ny fakàna ankeriny nataon'ny Houthis :
Eo ambanin'izao lalàm-panorenana ankehitriny izao — mbola andalam-pandinihana ny drafitra — raha voatsipaka ka tsy afa-manatontosa ny andraikiny ny filoha, na nametra-pialàna, ny filohan'ny parlemanta no no miakatra mandray ny toerany. Ny filohan'ny parlemanta ankehitriny, Yahya Al-Rayi, dia tomponandraikitra ambony ao amin ‘ny GPC ary naratra nandritry ny fanafihana ny Lapan'ny Filoha tamin'ny 2011.
Kanefa, ny fe-potoana fiasàn'ny parlemanta ankehitriny, izay voafidy tamin'ny 2013, dia efa tokony nifarana enina taona taorian'izay, ny 2009. Noho ny fifanarahana dia nahemotra roa taona ny fifidianana. Tokony ho tamin'ny 2011 no nanao fifidianana, saingy nahemotra indray taorian'ny fitroarana tamin'ny 2011. Nahazo seza 238 amin'ireo 301 ao amin'ny parlemanta ny GPC.
Nifarana niaraka tamin'ny fametraham-pialàn'i Hadi ilay dingana napetraka, hoy i Al-Sakkaf, ary tokony ho foana ilay fanalavàna fe-potoana fiasàna ho an'ny parlemanta, manaisotra ny mety ho fahafahan'i Al-Rayi hiakatra amin'ny toeran'ny filoham-pirenena.
Jeb Boone, Amerikana mpanao gazety nonina tao Yemen nanditry ny fitroarana nanongànana an'i Saleh tamin'ny 2011, naneho hevitra hoe:
Tsy nitranga izao rehetra izao raha navelan'ny fianakaviambe iraisam-pirenena ny tanora tao #Yemen tamin'ny 2011 hanongotra ny rafitra governemanta tranainy.
Raha toa ianao mbola miasa saina mikasika izay mitranga ao Yemen, azonao vakiana ny fanazavana notsotsorin'i Karl Sharo, bilaogera :
Isalorako indray mandeha indray ny satroka besofina maha-manampahaizana manokana ahy sady manoratra ny Torolàlana ho an'ireo Olona Sahiran-tsaina Te-Hahalala #Yemen
Nisy fihetsiketsehana nitranga tamin'ny faran'ny herinandro, nandàvana ny fametraham-pialàn'i Hadi ary nanoherana ny Houthis tao Sanaa, Taiz, Ibb, Hodeidah, sy Al-Baydha, raha toa ka nisy ihany koa fihetsiketsehana hafa nitakiana ny fisintahan'ireo faritany any atsimo sy fanapahana ny fifamatorana amin'i Sana'a. Kanefa i Yemen tsy hoe fotsiny miatrika fahabangana ara-politika, fa koa loza misoko mangina mahatsiravina mandona ny maha-olombelona araka ny anipihan'i Oxfam azy.
Sary miaty tarehimarika avy amin'ny IRIN maneho ny fanamby amin'ny maha-olona atrehan'i Yemen.
Voalahatra hiatrika fivoriana maika tamin'ny Alahady 01 Feb ny parlemanta ao Yemen hiadiana hevitra mikasika ny fametraham-pialàn'i Hadi na hanangana filankevi-pitondràna hitantana ny firenena mandra-pahatongan'ny fifidianana. Kanefa, nofoanana ilay fivoriana ary tsy misy daty vaovao napetraka.
Na eo aza ny fisalasalàna misoko mangina, vahoaka mahazaka dona ny Yemenita, mijery hatrany ny lafy tsarany, araka ny ibitsihan'i Abubakr Al-Shamahi azy:
“Tsy anananay ny filoha, governemanta, tafika, fandriampahalemana, vola, na firenena. Fa mbola velona izahay. Ho ela velona anie ny vahoaka Yemenita!”
Mohammed Al-Assadi koa nanampy hoe:
Na eo aza ireo fanamby henjana eny an-kianja, manorina fanantenana isanandro ny vahoaka ao #Yemen hoe hisy vahaolana hipoitra ery amin'ny fivoahana ny tonelina maizina ery.